Qoddobkii Ugu Horeyay Ee Shirka Dhuusamareeb Oo Isfaham Laga Gaaray – Heemaal News Network
Qoddobkii Ugu Horeyay Ee Shirka Dhuusamareeb Oo Isfaham Laga Gaaray
Iyaddoo maalinkii labaad uu galay shirka wadatashiga dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir ayaa lasoo sheegaya in isku soo dhawaasho laga dareemayo madaxda ku shirsan Dhuusamareeb.
Madaxweyne ku xigeenka maamulka Galmudug Cali Daahir Ciid oo la hadlay laanta afka Soomaaliga ee BBC ayaa sheegay in isku soo dhawaasho weyn laga dareemayo shirka madaxda isagoo si gaar ah carabka ugu dhuftay in la isku fahmay qaar ka mid ah qodobadii xasaasiga ahaa.
“Qodobkii ugu horreyay oo ka mid ahaa qodobada aadka la iskugu hayay oo ah dhanka soo xulista Xildhibaanada gobolada Waqooyi ee Soomaaliland inta aan ogahay is-fahan aad u ballaaran ayaa laga gaaray waxna way ka dhiman yihiin,” ayuu yiri madaxwayna ku xigeenka maamulka Galmudug.
Madaxweyne ku xigeenka Galmudug ayaa intaa ku daray in qodobka soo xulista Baarlamaanka xubnaha kasoo jeeda Somaliland aay ka qeyb qaadan doonaan guddoomiyaha Aqalka Sarre iyo Raysal wasaare ku xigeenka Xukuumadda Soomaaliya.
Wali waxaa dhiman qoddobo kale oo aad xasaasi u ah oo dbamaantood la xiriira sidii dalka uga qabsoomi laheyd doorasho wadar ongol ah xili waqtiga madaxweyne Farmaajo uu ku eg yahay 8-da bishan Febraayo oo ku beegan maalinta Isniinta ah soo socota, waxaana si gaar ah indhaha loogu wada hayaa natiijada kasoo bixi doonta shirkan ka socda Dhuusamareeb.
Militiriga Afganbiga ku Qabsaday Myanmar Oo Xayiray Baraha Bulshada.
Baarlamaanka Puntland Oo Ansixiyay Xeerka Diiwaan-gelinta.
Madaxwayne Biden Oo Raali-galin ka Bixiyay Ciidamo Seexday Goob Baabuurta la Dhigto.(Sawirro)
Heemaall January 23, 2021 January 23, 2021
Heemaall January 26, 2021 January 26, 2021
R/Wasaarihii Hore Ee Somaliya Cumar Carte Oo Oo ku Geeriyooday Hargaysa Iyo Dowlada Oo ka Hadashay